Indlela yokuphatha i-cystitis kubantu besifazane
Ngokuvamile thina, besifazane, sibhekene nezifo ezihlukahlukene, izifo nokuvuvukala. Ngenxa yokuthi umzimba wethu kunzima kakhulu ukuhlela, ngezinye izikhathi kuthatha okungaphezu kosuku olulodwa ukuze sibuyele. Siyeka ukuzijabulisa, futhi ngezinye izikhathi ngisho nokuzwa imizwa engathandeki noma ubuhlungu, okwenza uthando nomlingani wethu, futhi kubonakala sengathi umhlaba wonke uyahlukana nathi. Kodwa ezweni lethu lamanje kukhona izidakamizwa eziningi, ezibiza kakhulu futhi ezingekho kahle kakhulu, okuthi, uma zisetshenziswe kahle, zingasisindisa kuzo zonke izinkinga. Isihloko sanamuhla sizozinikezwa ku-cyst - sithatha kalula futhi sinzima ukuphatha ukuvuvukala. - "Indlela yokwelapha i-cystitis kubantu besifazane?" - umbuzo ovame ukubuzwa phakathi kwabesifazane.
Futhi-ke, ake sithole ukuqala, yini i-cystitis? I-Cystitis ukuvuvukala kwezindonga zesisu, futhi abesifazane bavame ukuvame kakhulu kune-cystitis, ngoba sine-urethra emfushane nebanzi. Amadoda alula kakhulu, ane-urethra encane futhi ende, futhi ukutheleleka kubanjwe kulo mzila, kodwa, ngeshwa, lokhu kunemiphumela yaso. I-Cystitis ingaba yinkimbinkimbi futhi engapheli. I-cystitis esithathelwanayo futhi engasetshenzisiwe nayo ihlukile. I-cystitis engasetshenzisiwe ibonakala eqinisweni lokuthi i-membrane ye-mucous ye-vesipha ishayiswa. Ukuthukuthela kubonakala futhi kumakhemikhali akhululwa kanye nomchamo, kuhlanganise nezidakamizwa ezingasetshenziselwa ukusetshenziswa isikhathi eside.
Kodwa ngokuvamile i-cystitis iveza isifo. Ukutheleleka kungene emgodleni ngesikhathi sokuvuvukala kwe-urethra noma ku-genitalia yangaphandle, noma ezifweni zezinso. I-Cystitis ingavela ku-E. coli, i-fungi ehlukahlukene, i-Trichomonas namanye amabhaktheriya. I-Cystitis ingase ivele ekuqothukeni, futhi kusukela ekungewona umkhosi wokuhlanzeka empilweni yobulili. Ukuze uthole i-cystitis, ezinye izifo azitholakali, ngoba izindonga zesibindi ziphikisana kakhulu nezifo, kuyadingeka ukuyiqinisa nge-hypothermia, ukukhathala okukhulu, ukukhathala, ukuqhuma komchamo, njll.
I-cystitis enamandla ivele ngokuzumayo, emva kwesikhashana ngemuva kwe-hypothermia. Izimpawu ze-cystitis ezinzima zilandelayo: ubuhlungu lapho uchama, ubuhlungu esiswini esingaphansi, umchamo we-purulent. Ngokuhamba kwesikhathi, ubuhlungu buyanda futhi bube nesimfanelo esihlala njalo. Isifiso sokuvuthwa sanda, futhi kuba nzima ukugcina umchamo. Ngokuvamile idlula ezinsukwini ezingu-2-3 ngaphandle kokwelashwa okukhethekile. Kodwa uma ungatholi ukwelashwa okufika ngesikhathi noma uthole ukwelashwa okungalungile, i-cystitis enamandla ingaba yindlala. Kukhona i-cystitis engapheli kanye ne-cystitis enamandla, kuphela ebuthakathaka kakhulu. I-cystitis engapheli iqhubeka ngokuqhubekayo, hhayi izibonakaliso eziphawulekayo zesifo, noma ukuqhuma okungafani nezinye izikhathi zokukhanya.
Indlela yokuphatha i-cystitis kwabesifazane? Okokuqala, udinga ukufudumala izinyawo zakho futhi uzigcine zifudumele. Gcina izinyawo zakho emanzini ashisayo ngosawoti, bese ubeka izinzwane zakho ezinyaweni zezimvu. Usizo olukhulu. Phuza itiye elishisayo kakhulu ngamakhambi (ikakhulukazi kusiza itiye lezinso), udinga ukwandisa ukuchama ukuze wonke amagciwane angahlanzwa emzimbeni. Lokhu konke kuneluleka ngemithi yomdabu.
E-cystitis enzima, kufanele ugcine ukuphumula kombhede, kusukela ekudleni okudingayo ukukhipha ukudla okunewosawoti neziphuzo ezidakayo. Uma ubuhlungu bukhulu, khona-ke kufanele uphuze amaphilisi okukhulula isikhala semisipha yesifiso, isibonelo, akukho-shpa noma i-papaverine. Thatha ama-antibiotics, futhi uqiniseke ukuthi ubona udokotela, ngoba i-cystitis ukuvuvukala okudinga ukwelashwa okufanele. Esikhathini esithile esitolo sezidakamizwa kungenzeka ukuthenga amathebulethi "i-Nitroxolinum", lawa amaphilisi akhula umsebenzi wezinso, ngakho-ke wonke amabhaktheriya ahlanzwa emzimbeni, noma kungenzeka ukuthi athenge noma yimiphi imithi ekulondolozeni i-nitroxoline, isibonelo "5-buton". Ngomphumela we-100%, thenga "amakhandlela" e-Indometacin, futhi uwafake ngaphakathi ngaphakathi ebusuku, njengoba enza ubundlululo obukhulu - lokhu kuwumphumela ohlangothini.
Izibalo zibonisa ukuthi owesifazane ngamunye udala i-cystitis, futhi ngaphezu kwesisodwa. Udinga ukuziqaphela ngokwengeziwe, ukuze ungabi nezifo ezinjalo, lokhu akuyona isifo esibi kunazo zonke, kukhona okubi nakakhulu.
Indlela yokwenza i-enema yokulahlekelwa isisindo?
Umphumela womsindo emzimbeni womuntu
Kungani amajwabu amehlo ekhukhumeza futhi evuvukala?
I-Grass Cat's Claw, izindawo zokuphulukisa
Ukuphulukiswa nemikhiqizo yemilingo ye-pyrite
Izinga elivamile le-insulin egazini
I-Horoscope yeSagittarius-abesifazane ngoNovemba 2016
Isaladi yezinyosi kanye anyanisi
Ungayiphuza kanjani itiye futhi ungalimazi impilo yakho ngesikhathi esifanayo
Ingaphakathi ekamelweni labantwana labantwana ababili
Indlela yokuphambanisa imisipha yesifazane?
Ama-muffin nama-banana amakhiwane
Amaphikishi okwakhiwa kwekhanda lokuguga isikhumba
Indlela yokunquma umlingiswa womuntu ngosuku lokuzalwa: Ifomula kanye nokumisa ikhodi kusuka ekubaleni kwamanani
Indlela yokwazi umlingiswa womuntu ngemikhuba yakhe nokuziphatha kwakhe
Unyaka omusha: imibono kulabo abazogubha owodwa
I-phytotherapy yangaphandle yezinyawo zemilenze
Iyiphi indlela engcono kakhulu yokuqeqesha ukuze ulahlekelwe isisindo ngokushesha?
Isimo Sezulu eSt. Petersburg ngoJuni 2016: kulindeleke ehlobo